Ọ dịghị ka nke ahụ - ysmụ nwoke --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ọ dịghị otú ahụ nkezi 4.7 / 5 si 24
NA / A, o nwere ihe nlere 79.3K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
Ọ nweghị ahụmịhe ọ bụla na ngalaba ọrụ, mana ọ mechara tinye akwụkwọ. N'ụzọ dị ịtụnanya kama iziga akwụkwọ ozi mkpuchi, o zigara otu akwụkwọ ịhụnanya ịhụnanya ya bụ BL ezughị ezu. Nke a dọtara uche ha ma nyere ya aka ịgafe ule ikpeazụ!
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ mere mkpọtụ dị ukwuu banyere akwụkwọ akụkọ ahụ na nro ahụ karịrị amara gbanwere n'ịhụnanya, nabatara Imiro maka ịchọ ịmatakwu banyere onye dị njikere ịnwụ maka ịhụnanya
Imiro onye na enwetabeghị mmekọrịta ọ bụla na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma na-etinye imi ya na akwụkwọ akụkọ ya ọ ga-adọpụ? Kedu ka ọ ga - esi kwekọọ na uto ilu nke ọha mmadụ, na ihe niile ọ ga - adị ka atumatu?
Akụkọ na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ ebe a
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ nkọwa yaoi,vidiyo yaoi
Distancia ~ Onye Na - enweghi Mgbaghara ~
Naanị Gị, Naanị